Indawo epholileyo kumbindi wedolophu: Stadtflucht Lüneburg
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSusanne Und Arne
Indawo entle ibekwe ngqo kumbindi wesixeko saseLüneburg kwiyadi ethe cwaka yendlu yedolophu. Indawo entsha esesitalatweni enemivalo kunye neendawo zokutyela ikufuphi nekona, kwaye kulapho indawo yabahambi ngeenyawo edumileyo engenamoto iqala ngeevenkile zayo ezininzi.
Igumbi eliphezulu linekhitshi eline-oveni kunye nefriji, indawo yokutyela, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye nophahla olunophahla olunombono wembali yeMonastery yoMoya oyiNgcwele. Ifulethi liqukethe ikhitshi elinendawo yokuhlala kunye neyokutya kwi-2, igumbi lokulala (nantsi iTV) kunye ne-sofa encinci, igumbi lokuhlambela kunye ne-roof terrace ekhethekileyo. I-WiFi yasimahla iyafumaneka kwiflethi kwaye iiTV ezinentambo yeTV ziyafumaneka.
Ifriji yemit Gefrierfach
Indawo yokupaka iimoto ezininzi ebhatalelwayo eseyadini – inendawo eyi-1
IWallstrasse ikwidolophu yaseLüneburg. Ukusuka apha, indawo yabahambi ngeenyawo, idolophu yakudala eyimbali, ithiyetha yaseLüneburg, imyuziyam yetyuwa ekwimbali yetyuwa kunye neSalztherme SaLü zikumgama wokuhamba. Ivenkile enkulu elandelayo (i-Edeka) ikufuphi nje nekona, kwindawo eyayifudula isetyenziselwa ityuwa (uhambo lwemizuzu emi-5-kukho ezinye iivenkile ezithengisa ukutya kwimbali yasePlatz am Sande (nakhona yimizuzu emi-5 kude)). Imarike edumileyo yeveki nganye ibakho rhoqo ngooLwezithathu nangoMgqibelo kusasa kwindawo yemarike yaseLüneburg kwiholo yedolophu.
I-Lüneburg inendawo yokutyela edlamkileyo kunye nebhari. Iqala kanye ekoneni ukusuka kwigumbi lokuhlala: i-L'Osteria edumileyo isandula ukuvulwa, kwaye uninzi lwabantu, iindawo zokutyela ezincinci zibekwe e-Rackerstraße, iphephandaba lendawo elithe layibiza mva nje ngesitalato. ISchröderstrasse kunye nezinye iindawo zokutyela kwindawo yabahambi ngeenyawo nayo ayikude.
Umbuki zindwendwe ngu- Susanne Und Arne
Asihlali kwindlu yedolophu, kodwa sihlala eLüneburg ngokwethu kwaye siyakuvuyela ukukunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nesi sixeko esihle, esiyimbali. Sithetha isiJamani kunye nesiNgesi.
Ukuba ufuna ukuhamba nabantu aba-4 okanye ngaphezulu, jonga ukuba ezinye izindlu kwisiqalekiso sesixeko sethu zisekhona. Igumbi lethu elihle kumgangatho ophantsi wesakhiwo sangasemva okanye indawo eyonwabileyo kumgangatho ophantsi wesakhiwo esingaphambili unikezela indawo ye-2. Indlu ekhangayo kumgangatho wokuqala wesakhiwo esingaphambili senzelwe abantu be-4 kwaye inamagumbi okulala ama-2.
Asihlali kwindlu yedolophu, kodwa sihlala eLüneburg ngokwethu kwaye siyakuvuyela ukukunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nesi sixeko esihle, esiyimbali. Sithetha isiJamani k…
USusanne Und Arne yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lüneburg